Maxkamad kutaalla Itoobiya oo Xukun ku riday Dad lala Xiriiriyey Ururka Al-Shabaab | SAHAN ONLINE
Maxkamad kutaalla Itoobiya oo Xukun ku riday Dad lala Xiriiriyey Ururka Al-Shabaab
ADDIS ABABA – Maxkamada sare ee dalka Itoobiya ayaa xukun xabsi ah ku riday 23 qof oo lagu eedeeyey iney ahaayeen shabakad ballaaran oo ka howlgalaysay gudaha dalka Itoobiya isla markaana xiriir la leh ururka Al-Shabaab.
Maxkamada sare ayaa eedeysanayaashan saddex sano ka hor ku eedaysay in ay qorshaynayeen falal argagaxisanimo ay ka fuliyaan wadamada bariga Afrika oo ay ku jirto Itoobiya.
Wakaaladda wararka ee FANA ayaa maxkamada kasoo xigatay in saddex kamid ah raga la xukumay ay qorshaynayeen in dowladda Islaami ah ka asaasan dalka Itoobiya.
Sidoo kale maxkamada ayaa ku eedaysay dadkan iney ka howlgalayeen lix magaalo oo ay ku jirto caasimada Addis Ababa intii u dhaxaysay 2010 ilia 2014,waxaa kaloo lagu eedeeyey iney dagaalyahano ka qoranayeen gudaha Soomaaliya si tababar loo siiyo dina loogu soo celiyo Itoobiya.
Dowladda Itoobiya ayaa xuduud dheer la leh Soomaaliya taasoo inta badan ay ka dhacaan qaraxyo iyo falal kale oo argagaxisnimo marka loo barber dhigo dalka Soomaaliya iyo Kenya,iyadoona la sheego in sirdoonkoodu ka xoog iyo khibrad badan yahay kuwa kale.